Rdj Mozika Award: ireo lamaody nisongadina tamin'ny sabotsy
Nicola Dupuis, Melvin sy Faneva Ima: Nanentana amin'ny fijanonana ao an-trano
Ho fiaraha-mientana amin'ny fanentanana ny vahoaka mahakasika ny tokony hanajan'ny tsirairay ny toromarika momba ny ady atao amin’ny coronavirus dia namoaka horonan-tsary fohy i Melvin, Faneva Ima sy ny coach Nicolas Dupuis. Ao anatin'izany horonan-tsary
Covid-19 : Niakatra 43 no voa... mila mitandrina isika mitandrina
Mahatratra 43 hatramin'ny omaly folakandro ny isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus araka ny tarehimarika farany navoakan'ny mpitondra tenin'ny CCO-Covid 19.
Matin'ny Coronavirus i Julie, 16 taona…
Tovovavy 16 taona no zaza tsy ampy taona voalohany namoy ny ainy vokatry ny aretina Coronavirus tao Frantsa. Kohaka
COVID-19 : Nitombo 4 ny voa, avy any andafy avokoa!
Nitombo 4 indray ireo olona mitondra ny otrikaretina “coronavirus” eto amintsika, araka ny antontan’isa nomen’ny profesora Vololontiana Hanta, avy eny amin’ny
COVID-19 : Tsy nisy tranga vaovao omaly
Tsy nisy ny tranga vaovaon'ny Coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny 24ora raha ny tatitra
CORONAVIRUS Tafiakatra 17 ireo voamarina fa voa Eo amin'ny « stade 1 » no misy an'i Madagasikara amin'izao,
ao anatin'ny fiatrehana an'ilay valan'aretina Coronavirus, araka ny tatitry ny filoham-pirenena omaly. Mbola tsy mihoatra ny 300 hatramin'ny 500 isa mantsy ireo tratran'ity aretina ity eto amintsika ary tsy nisy ny namoy ny ainy vokatr'izany hatreto hoy ihany ny fanazavana.
Taona vitsy izay dia zary lasa fotoana andrasan’ny mpanakanto sy ireo mpankafy azy fatratra ny Rdj Mozika Award.
Ilay hetsika hanolorana amboara ho an’ireo artista sy mpanakanto mendrika isan-tsokajiny an’ny taona lasa. Tamin’ity taona ity dia efa nahatratra 175 teo ho eo ireo mpanakanto voafantina sy tafiditra ao anatin’ireo ho fidiana. Niisa sokajy 21 no nosoritana hanolorana amboara ho an’ireo artista sy mpamokatra ary fiaraha-miasa mendrika tamin’iny taona 2019 iny.
Isan’ireo nahazo amboara betsaka indrindra i Shyn sy Denise ary i Big Mj: Voasalotra ho Mpanakanto an’ny taona 2019 i Denise ary azony ihany koa ny amboara ho an’ny mozika milamina ho an’ireo artista vehivavy.
Ny Ivenco no mpamokatra sy mpikarakara lanonana nibata ny amboara. Ny Tarika Nate Tex no nahazo ny amboara ho an’ny hira milamina. Ny reny nitaiza an’i Basta Lion no nandray ny amboara ho azy fa tsy eto an-toerana ity farany. Nahazo amboara roa be izao i Lion Hill.
Ireo vehivavy tonga nanotrona ny lanonana ka nanamarika ny fiakanjony.
Ireo ao amin’ny ekipan’ny Salon de beauté Vero Vero, Johane, Titi Coach zumba, Tence Mena sy ny mpandihiny sy Rijade izay samy nokarakarain’ny Chic By Fabiola ny endrika sy ny akanjon’izy ireo. I Meizah kosa no nibata ny amboara ho an’ny “Look feminin” tamin’ny lanonana. Niaraka nandray ny amboara teny ambony sehatra tamin’i Wawa ny vady aman-janany. Nanokatra ny lanonana, tany am-boalohany ny Na’Danse Girls. Nampiakanjo an’i Mr Sayda i Lalaina Andria, mpamorona didin’akanjo avy any Frantsa. Tsy nanao ambanin-javatra ny fiakanjony koa ireo artista lehilahy. Palitao ambony ambany amin’ny endriny miavaka ny an’i Big Mj sy Jazz MMC. Nanome seho hafakely teo amin’ny fiakanjo i Zatia Rocher. Ireo mpikambana avy ao amin’ny tarika Sisca